भक्तपुरमा भेटेरिनरी पसल अनुगमनमा नक्कली भेटेरिनरी डाक्टर सहभागी | Vetkhabar
Home कृषि भक्तपुरमा भेटेरिनरी पसल अनुगमनमा नक्कली भेटेरिनरी डाक्टर सहभागी
भक्तपुरमा भेटेरिनरी पसल अनुगमनमा नक्कली भेटेरिनरी डाक्टर सहभागी
भक्तपुर- भक्तपुर नगरपालिका अनुगमन समितिले सातवटा भेटेरिनरी पसलमा अनुगमन गरेको छ । नगरपालिकाका वडा निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापतिले भेटेरिनरी पसलहरु औषधी व्यावस्था विभागको अनुमति बिना सञ्चालन भइरहेको पाइएको बताए ।
पसलहरुमा म्याद नाघेका सामानहरु पनि विक्री भइरहेको प्रजापतिलेले जानकारी दिए । भेट खबरसंगको कुराकानीमा उनले आइतबार र सोमबार गरी सात वटा पसलमा अनुगमन गर्दा भेटेरिनरी पसलमा कैफियत भेटिएकोले १ पटकलाई सचेत बनाएको बताए ।
रोचक त के छ भने नगरपालिकाले गरेको भेटेरिनरी पसल अनुगमन समितिमा एक व्याक्तिले आफू भेटेरिनरी डाक्टर भएको भन्दै हस्ताक्षर गरेका छन् । नगरपालिकाको अनुगमन समितिका संयोजक राजकृष्ण गोराले भेटेरिनरी डाक्टर सहितको आफ्नो टोलीले भेटेरिनरी पसल अनुगमन गरेको बताए।
अनुगमनमा गएर भेटेरिनरी डाक्टर भनेर हस्ताक्षर गर्ने पंकज खनालसंग भेट खबरले तपार्इँ कुन व्याचको डाक्टर हो ? भनेर सोध्दा उनले डराउँदो स्वरमा आफू डाक्टर नभएको खुलासा गरे । आफू कार्यरत संस्था ‘भेट फर योर पेट’लाई उक्त अनुगमनमा नगरपालिकाले बोलाएको र आफू कार्यरत संस्थाका डाक्टर प्रणव जोशीले आफूलाई पठाएको उनले बताए । उनका अनुसार डाक्टर जोशीले नै उनलाई डाक्टर बन्न लगाएका थिए । उनले भने‘यसमा मेरो केही दोष छैन डा. प्रणवलाई नै सोध्नु होला ।’
यस सम्बन्धी जानकारी लिन डाक्टर प्रणव जोशीसँग जिज्ञासा राख्दा सुरुमा उनले पंकज डाक्टर नै भएको दावी गर्दै विभिएससी अध्यन गरेको मान्छे डाक्टर त हो नि भनेका थिए । भेटखबरले डाक्टर भए भेटेरिनरी काउन्सिलको दर्ता नम्बर र पास भएको साल बताउन भनेपछि अकमकिएका उनले यस विषयमा भेटेरै कुरा गरौं तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ ? भनेका छन ।
भेट खबरले उनलाई तपाईँ भेटेरिनरी पेशालाई मर्यादित बनाउन लाग्नु पर्ने चिकित्सककले काउन्सिमा परिक्षा नै नदिएको व्याक्तिलाई डाक्टर भनेर सरकारी निकायमा पठाउन मिल्छ ? भन्दा उनले आइतबारको अनुगमनमा आफू समय अभावले जान नसकेको र आफ्नै ‘भेट फर योर पेट’मा काम गर्ने पंकजले ‘म जाउँ दाई’ भनेकोमा आफूले उनलाई पठाएको सम्म सत्य भएको तर उनले डाक्टर लेखेर समितिको मुचुल्कामा हस्ताक्षर गर्नु भने गल्ती भएको बताए । उनले अध्ययनरत व्यक्तिलाई डाक्टरको भूमिकामा गएर अनुगमन गर्नु गलत भएको बताए ।
जब नक्कली डाक्टर अनुगमनमा गएको खुलासा भएपछि अनुगमन समितिका निरीक्षक रामकृष्ण प्रजापति अचम्मित भए । उनले भने ‘हामीहरुले त डाक्टर भनेरै अनुगमनमा लगेको हो उहाँले त्यस्तो किसिमको घृणित काम गर्न हुदैन थियो । कुनै व्यक्तिले आधिकारीक रुपमा नगरपालिकाको अनुमनमा म भेटेरिनरी डाक्टर हो भनेर आउँछ भने कसरी अविश्वास गर्ने भनेर हामीहरुले परिचयपत्र हेरेनौं । यो हाम्रो ठूलो गल्ती हो ।’
आजैै यस विषयमा अनुगम समितिका संयोजक सहितको टोली बसेर छलफल गर्ने बताउदै उनले यस्ता व्यक्तिलाई कारवाही गर्न समेत पछि नपर्ने बताए । उनका अनुसार अनुगमनका क्रममा एक पसलमा पुग्दा त्यहाँ अर्का भेटेरिनरी डाक्टर समेत भेटिएका थिए । ती डाक्टरसँग पंकज खनालले कुरा गर्दा आफू एक बर्ष अगाडि नै डाक्टर भएको समेत बताएका थिए ।
भेटेरिनरी व्यावसायसँग आवद्ध विभिन्न संघ संस्थाहरुले नगरपालिकाको अनुगन सराहनीय भएता पनि यसरी एउटा अध्यनरत व्याक्तिलाई डाक्टर भन्दै बजार घुमाउनु भनेको व्यावसायीलाई आतंकित पार्ने काम भएको समेत बताएका छन् । नेपाल भेटेरिनरी एशोसियसनका अध्यक्ष डा.शीतलकाजी श्रेष्ठले पंकज खनाल भेटेरिनरी डाक्टर नभएको पुष्टि भएको बताएका छन ।
Previous article१० किसान परिवारका लागि जागिर खुल्यो, तलब ३२०००
Next articleयसरी खुल्यो अवैध धन्दाको पोल
भारतीय कम्पनीले किसान ठग्दै, भिटामिन भन्दै सतप्रतिशत पानी बेच्दै(रिपोर्ट समेत)
नक्कली ‘भिटाब्लेन्ड ए’ बजारमा, पानीमात्रै ९९ प्रतिशत
एनभीएले म्याराथन आयोजना गर्दै, पुरस्कार १० लाख ५० हजार
खराब व्यवसायिक अभ्यास र कोरोनाले अस्तव्यस्त पोल्ट्री व्यवसाय
सरकारकाे निर्णय प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाद्वारा भाेलिपल्टै उलङ्घन
© Designed By VET IT TEAM